Mandalay Theme 01 for Sony Ericsson (240×320 pixels)
OBS Studio 26 တွင်ရလာသည့် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တချို့
MgHla Mandalay Theme 01
screen size 240 x 320 pixels ရှိတဲ့ Sony Ericsson Mobile Phones တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကျတော် လုပ်ထားတဲ့ Mandalay Theme 01 theme ပါ... ပုံပေါ် ကလစ် လုပ်ပြီး download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်...
My Labels: Mobile Phone, handset
Steve Evergreen said…
and,,, how can i put in phone?
khin oo may said…
အစ်ကိုခင်ဗျာ....အစ်ကိုရေးထားတဲ့အတိုင်း ပုံပေါ်ကိုတင် ပြီးဒေါင်းပြီးတော့ Win-RAR ဖိုင်တစ်ခုရပါ တယ်ခင်ဗျာ......အဲဒါကိုဖုန်းရဲ့ မန်မိုရီကဒ်ထဲက Themes ထဲကို extract ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်....နောက် ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီး Themes ထဲကိုပြန်ကြည့်တော့ Themes အနေနဲ့မပေါ်ဘဲ png ပုံ ဖိုင်အနေနဲ့သာတွေ့ရပါတယ်..... ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ မှားနေသလဲဆိုတာရှင်းပြပေး ပါ.....
Ko PoeThar Blog said…
How about the Nokia ?
Nyi Nyi Myanmar said…
download တော့ လုပ်ပြီးသွားပြီ နောက်အားမှ ထည့်ကြည့်တော့မယ်
MgHla_Mandalay_01.thm ဖိုင်ကို ဖုန်းထဲကို bluetooth နဲ့ထည့်လိုက်ရင် Themes ဖိုဒါအောက် ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်... အဲဒီထဲမှာ ရှာပြီး တွေ့ရင် select လုပ်ပြီး set ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
အောင်အောင် ဒေါင်းလုပ်ကို download manager တစ်ခုခုနဲ့ လုပ်လို့ထင်ပါတယ်... ကျတော် တင်ထားတဲ့ လင့်ခ်က http://www.mghla.com/share/MgHla_Mandalay_01.thm ဒီလိုပါ... win rar file မဟုတ်ပါဘူး... အခုဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ rar ကို thm ပြောင်းပြီး ပြန်ထည့်ကြည့်ပါဦး...
@Ko Phoe Thar
Nokia မှာ theme လုပ်တဲ့ software ရှာမတွေ့သေးလို့ပါ...
@မခင်ဦးမေ နဲ့ ကိုညီညီ ကျေးဇူးပါ...
Adobe CS4suite မှာ nokia အတွက် သာမက အားလုံးသော ဖုန်းမျိုးစုံ ( iPhone ) မပါသော ဒီဇိုင်းများ၊ Theme များကို model အလိုက် create လုပ်လို့ရပါတယ်။
Some themes are here.
အကိုရေအဒီလိုလုပ်လို့ရတယ့် software လေးရှိရင် ရှယ် ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။အခု mandalay theme ကလဲသုံးလို့အစဉ်ပြေပါတယ်။message ring tone ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊
ဟုတ်ပါတယ် အပေါ်က KO ပြောသလိုပဲ့ အဲဒီ theme လုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးရှိရင် တင်ပေးပါနော် ကျနော်လည်း ကလိချင်ပါတယ်။ မန္တလေး theme ကလည်း သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ အားလုံး ကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင် ပါတယ် အကိုကြီး မောင်လှ ခင်ဗျား။
http://developer.sonyericsson.com/site/global/home/p_home.jsp?ver=4001&cc=sg&lc=en စာမျက်နှာမှာ Themes Creator ဆိုတဲ့ နေရာကနေ download လုပ်နိုင်ကြောင်းပါ...